‘जय श्री दाम’ पोस्टर बाट मुख्य नायिका नै गायब ! – An Online Entertainment News Portal
HomeEntertainment‘जय श्री दाम’ पोस्टर बाट मुख्य नायिका नै गायब !
फिल्म ‘जय श्री दाम’को अफिसियल फर्स्टलुक पोस्टर रिलिज गरिएको छ । फिल्मको सार्वजनिक पोस्टरमा लिड अभिनेत्री जेबिका कार्कीलाई स्थान दिइएको छैन । मुख्य अभिनेता त्रय अमृत ढुङ्गाना, विनोद न्यौपाने र राजन खवितडा फिचर छन् ।
नामले नै कमेडी बोल्ने फिल्मको पोस्टरमा पनि पात्रहरुलाई सोहि प्रकारले फिचर गरिएको छ । राजन खतिवडा पण्डितको भेषमा प्रस्तुत हुँदा अमृत र विनोदले गमलालाई नमस्ते गरेको अवस्थामा देखिन्छन् । पोस्टरको ब्याकग्राउण्डमा नेपाली रुपैयाँको ‘नमुना’ जोडिएको छ ।
मङ्की टेम्पल प्रोडक्सन, क्रेजी ह्याण्डस् प्रोडक्सन र नेशनल मिडिया प्रोडक्सनको संयुक्त ब्यानरमा बनेको फिल्मलाई बिप्लोप उप्रेतीले निर्देशन गरेका हुन् । फिल्म शिक्षा अध्ययन गरिरहेका उप्रेतीको यो ठुलोपर्दाको डेब्यू निर्देशकिय फिल्म हो । फिल्मको कार्यकारी निर्मातामा पृथ्वी उप्रेती र मनोज उप्रेती छन् भने सह( निर्मातामा मित्र डि गुरुङ र रविन आचार्य छन् ।
निर्देशक उप्रेतीसँगै अमरद्विप सापकोटाको पटकथा रहेको ‘जय श्री दाम’लाई मित्र डि गुरुङको सम्पादन छ भने रविन आचार्य डिओपी रहँदा क्यामेरामेनमा नवराज उप्रेती छन् । यो फिल्ममा संगीत सुशआन्त गौतमको छ । अमृत ढुङ्गाना, राजन खतिवडा, जेबिका कार्की, विनोद न्यौपानेसँगै प्रमोद अग्रहरी र विष्णु सापकोटा पनि फिल्ममा लिड अभिनयमा छन् ।
यसैबीच निर्माण टिमले फिल्मको अफिसियल प्रदर्शन मिति पनि सार्वजनिक गरेको छ । पहिलो अचल प्रचार सामग्री सार्वजनिक गर्दै पोस्टरमा फिल्मको प्रदर्शन मिति पनि जोडिएको छ । यो फिल्म आगामी पौष २० बाट दर्शकमाझ आउनेछ ।